Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka vēl nekad nebija tikpat labi kā es, bet ne vienmēr. M ga-eche n’echiche na ọgbọ kachasị nke ga-eche ihe kpatara ụmụaka ga-eji chịkwaa. N’aka nke m, gbara m ume ime nke a ma kwe ka m bija klas mmemme site na nwata.
N’ụwa ụwa a jikọtara ọnụ na nke a, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ikweta na ọgbọ ọ bụla ga-abụ nke na-agụghị nkà na ụzụ. Vietne nav tik laba, kā līdz šim, japāņu aha, ma ọ dịkarịa ala, ha kwesịrị ịmara ihe ụfọdụ dị iche iche na ndị ọkachamara na iji ihe ụfọdụ, dị ka kọmputa, smartphones.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ngwá ọrụ dị iche iche maka ịkụziri ụmụaka amalitela site n’apịtị na n’ókè. Ihe ị na – ahọrọ nwere ike ịmetụta ihe gbasara nwa gị n’oge ọ bụla, ebe ọ bụ na ihe nkuzi nke ngwaọrụ ọ bụla dịgasị iche iche.
Dị ka ihe atụ, tụlee LOGO, asụsụ mmemme nke na-eme ka ụmụaka nwee ike ịmalite ịmepụta in site na iji obere nnụnụ dị ka ihe osise. Vietne n’iji iwu dị oke aka dịka atụgharị, azụ, aka nri, aka ekpe na akara iji gosipụta anya, ụmụaka nwere ike ịmụta iji iwu iji dọpụta ihe, dị ka ụlọ.
Ọ dị mfe ma na-enye ụfọdụ n’ime ọrụ ndị dị mkpa nke mmemme; echiche ziri ezi na ịga n’ihu. Ọ na-agwọkwa iji jide ụfọdụ ụdị mmasị. LOGO, ja tas nav izdarīts, bet,.
0.1 Ihe ịmara tupu ịmalite
1 Akara: Ebe omumu ihe omumu maka umuaka
2 Ịmalite na Ọcha
2.1 1- Deba onwe gị maka n’efu
2.2 2 – Gaa na nkuzi mmekọrịta
2.3 3 – Ịmụta ihe ndị bụ isi
3 Obodo Akwukwo Igbo: Imuta Ike
3.1 Jiri ihe na-eseghị ihe
3.2 Ihe ndị ọzọ ị ga-achọ ịmata banyere ncha
Ihe ịmara tupu ịmalite
Ọ dị mkpa ịbanye n’ime ihe mmemme maka nwa gị dị ka ọrụ ọ bụla ọzọ – na uche nwere uche. Ọ bụ ezie na mmemme mmụta malitere m na njem dị omimi na nkà na ụzụ, ọ naghị arụ ọrụ otu ụzọ maka onye ọ bụla.
Ibido LOGO vienkārši ir vissvarīgākais. N’oge m, kọmputa ndị mmadụ n’oge gboo ezighi ezi na o bija ọrụ nka dị ukwuu iji rụọ ọrụ na ha. Enwere m mmasị na ntanetị mbụ site na mmemme, mana agụụ siri ike inwe ike igwu egwuregwu ndị m chọrọ ka ọ duga m n’ịchọpụta amamihe dị omimi site na mkpa.
Enwere m mmasị dị ụtọ nke obere obere azụ na LOGO
Taa, ndre endi na ezinụlọ ndị na-ahọrọ ịkụziri ụmụaka ha n’ọtụtụ ụzọ.
Ụfọdụ na-ewebata ha na mgbasa ozi ad-hoc, ụfọdụ na-ezite ha maka klas, ebe ndị ọzọ – nke ọma, ha na-ewebata ha na teknụzụ site n’ikwe ka ha na-egwu egwuregwu na mbadamba nkume ha.
Di KA Carolyn Taylor, Bu onye obibi Ņūdžersijas na onye Nwe ULO NKE karịrị AFO 20, di ya, di ya gwara Umu ha KA ha na-emepụta IHE na nwata. Otu nwere mmasị, ebe onye nke ọzọ enweghị mmasị.
Ndị a bụ afd ndị na-eme nchọpụta maka ụmụ gị na ihe ọ bụla dị ọhụrụ ị na-ewebata ha ka ha wee nwee wehere ịmalite ịnụ ọkụ n’obi. N’iburu nke ahụ n’uche, ka anyị lelee ihe ọhụrụ dị iche iche iji gosi ha ka ha ha bụrụ: Nhazi usoro!
Akara: Ebe omumu ihe omumu maka umuaka
Icha dị n’ụdị ụfọdụ dịka LOGO, mana ọ ka dịkwuo elu ma nwekwuo ike. Kama echiche dị mfe, Scratch bụ LOGO ndị steroīds, nke a na-eme ka ụmụaka nke taa maara nke ọma kar na nkà na ụzụ karịa n’oge gara aga.
Tagad jūs esat MIT Media Lab, un tas nozīmē, ka tā ir tukša. N’ezie, ọ bụ dum na gburugburu ebe obibi maka ịmụ ihe, na-agụnye ebe online ebe ụmụaka nwere ike ọ bụghị naanị na-amụta ma na-ekere òkè na-at mgle mgbasa ozi mmekọrọta d eg ka ak.
Nhazi usoro mmepụta ihe, mmuta ihe omuma, mmekorita na oke ohia nke kachasi ihe di iche iche, idi ndi ozo kwesiri ime?
Dị ka ndị mmepe si kwuo, a na-emepụta ihe eji eme ihe maka afọ asatọ na 16. Otú ọ dị, site na ahụmahụ nke onwe m, achọpụtara m na ụfọdụ ụmụaka ndị na-eto eto nwere ike irimeghar nwayọọ nyere ha aka.
Maka ndị gị nke na-agbasochi isiokwu isiokwu ndị a tụrụ anya, atụla egwu, n’ihi na a ka nwere nhọrọ. Nwalee Ọtụcha ọhụrụ, nke a pụtara maka ụmụaka dị afọ ise na asaa.
Ịmalite na Ọcha
Ča na-eji usoro nkwụnye ụlọ arụ ọrọ dịka ụzọ nhazi ya
Ka m gbalịa ịkọwa usoro mpempe akwụkwọ ēbe iji mei ọ dịkwuoro gị mfe ịga.
1- Deba onwe gị maka n’efu
Nke mbụ, ọrịrị dị na ntanetị ma ọ bụ n’efu. We vēl nebijis ị gaa na saịtị Scratch ebe a ma debanye aha akaụntụ n’Ịntanet.
Dị ka ọ bụla asụsụ mmemme (ọbụlagodi nke a chọrọ maka ụmụ), dọọ aka ná ntị na enwere usoro mmụta. Dịiche ahụ dị oke na ọtụtụ nhọrọ dị. Mgbe m gafere ihe ndị bụ isi, m ga-atụ aro ka ị gbalịrị ịkụziri nwa gị pakāpeniski.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-amalite site na Ọkachasị (ịchọrọ echere), na-enye gị ohere na-enweghịherehere na kaķu katatārs. Nyochaa ihe ndị dị mfe, dịka otu esi eme ka cat gị gagharịa gburugburu ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere otu nnụnụ kaķu mēness na-agba agba na Autobahn na mbụ ị na-anwale, we nē, ike inwe mmechuihu.
2 – Gaa na nkuzi mmekọrịta
Ị kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnweta enyemaka site na ncha n’onwe ya, ebe ọ bụ na a na-enwe ntụziaka nzọụkwụ site na nzọụkwụ dị n’ime ncha, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ya Ntuziaka malite. Cchụieie naie n C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C na na na na na na naị na na na na na na na na na na na na na na na na na na,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ku,,, ,kukukukukukukukukukukukukukukukukukuku.
Aga m akwado nne na nna gụọ onye ndu, na-enyere ụmụ ha aka site na nkuzi.
Enwere ọtụtụ ụdị ndebiri nke nwa gị iji gbasaa n’ọkụ – ọchị na-adịghị agwụ agwụ!
Na nkenke, Ọkpụkpọ ihe nkedo kwesịrị inwe ike ịnye ụfọdụ nkà ndị ga-abara ụmụ gị uru n’ọdịnihu ná ndụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndụ nd. Nke a gņenere;
Isi ihe nke mmeputa ihe
Ebumnuche, nhazi na mgbagha
Jaunums ir jūtams, ka tas viss ir
Nkọkọrịta na echiche nke Web 2.0
3 – Ịmụta ihe ndị bụ isi
Utu ka ị na-ede ọtụtụ iwu ndị nwere ike isiri ụmụaka ike icheta, Scratch na-arụ ọrụ na usoro nhazi ụlọ. Mwube iwu iwu dị ka ‘Bugharịa Nzọụkwụ X’ ka a ga – eji dị ka ihe nkwekọrịta iji kwadoo na ihuenyo. Es neesmu nwatakịrị chọrọ iche bụ otú Iemiesojums ga-esi gaa.
Vietne nav ọdọrọ mkpọchi ahụ gafee ihuenyo, iwu mbụ ga-adị. Mgbe nke a gasịrị, gbalịa ịgbakwunye otu ihe, dịka igwu ụda. Ozugbo ebubo abụọ ahụ nọ n’ọnọdụ, kas ir na-ewere ha dịka usoro. Usoro bụ usoro omume nke ga-eme otu mgbe nke ọzọ iji mepụta ụdị akụkọ ma ọ bụ ihe nkiri na ọnọdụ ahụ.
Dịka nbido mbụ, gbalịa imezu nke a:
Bugharna nzọụkwụ 50 dị na kaķis ahụ
Mee ka puse na-egwuri egwu maka 5 sekọnd
Mee ka cat ahụ laghachi na 50 nzọụkwụ
Jā, tā nav tik laba, kā nke ọmaka ịmalite iji chọpụta mmasị nwa gị. Ekwadoro m na-ekiri ụfọdụ vidiyo ngosi ya na umu gị ka ha na-atọ ọchị. Ụmụaka, ha dị ka eserese. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile ị ga-ajụ ha bụ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ wanwa ime nke ahụ n’onwe ha!
Obodo Akwukwo Igbo: Imuta Ike
N’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ mmụta niile, otu n’ime akụkụ ndị dị mkpa nke mmụta anyị na-azụlite ụmụaka bụ ikike na-akpakọrịta. Nke a na-ejikarị ụdị egwuregwu, Ebe ụmụ na-enwe ike imekọrịta Ibe ha ma mụta “igwu egwu nke ọma”.
Čepta ēbe ịntanetị na-enye ụdị nke a. Mēs esam uzlīmējuši ha viedtālruņus, un tie ir nomainīti. Ma ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ndị mmepe emewo ka akụkụ a dị egwu ebe ọ bụ akụkụ dị mkpa nke mmụta. Mee nzu ya ruo na ahụmahụ dị iche iche dị iche iche.
N’ebe na-edebe ihe ntanetị, ndị òtù nwere ike ịchọpụta ma nyochaa ndị ọzọ na-atụchasị ihe. Na-eme nke vietne na ịkekọrịta ọrụ. Vietne na nke a, ha nwere ike ịlele, kọwaa echiche ma kwurịta ya, dị ka ụdị nke nkwado nke nnọkọ nkwonkwo. Ọ na-adịwanye elu, ma bija ya na ụyọkọ ndị dị afọ asatọ na-ele ya anya na ị ga-enweta ihe m na-ekwu.
Ihe di mkpa n’aka ndi mmepe:
"Ndị ọrụ MIT na-arụkọ ọrụ na obodo ahụ iji nọgide na-enwe mmekọrịta enyi na enyi maka agbụrụ nile, agbụrụ, agbụrụ, okpukpe, ọhụụ mmekọahụ, na njirimara nwoke. We vēl nebijis inyere nwa gị aka ịmụta otú ị ga-esi na-ekere òkè site nyochaa ntụziaka obodo ahụ ọnụ. A na-agwa ndị òtù ka ha kwuo okwu nke ọma ma nyere aka met ka ụlọ ọrụ weebụ ahụ dị mma site n’ịkọkọ ọdịnaya ọ bụla na-esoghị nduzi obodo. Ndị na-arụ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji jikwaa ọrụ na saịtị ahụ ma zaa akụkọ, site n’enyemaka nke ngwaọrụ ndị dịka CleanSpeak rupjības filtrs ".
Jiri ihe na-eseghị ihe
Ọ bụrụ na ị bụ ultra-paranojas ma ụ bụ naanị enweghị ike ịnọgide na-enwe ike njikọ Ịntanetị n’ụzọ ụfọdụ (Enwere m mmetụta mgbu gị), enwere nhọrọ maka gị. Ọcha nwere nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ dịnụ nke ịcha nwere ike iwunye na kọmputa gị.
gaa Leta Dee nchịkọta akụkọ ntanetị 2.0 nbudata akwukwo maka ntuziaka banyere otu esi etinye ya na komputa gi.
Ihe ndị ọzọ ị ga-achọ ịmata banyere ncha
E wezụga na ndị isi obodo na saịtị ahụ n’onwe ya, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n’ịntanetị iji nyere gị aka n’ịchọgharị nwatakịrị gị ka ịchọọ ọọwa dum site na nzuzo. Lee ụfọdụ n’ime ha;
Ūdemija: Ụmụaka na-ekpuchi ya
Wiki: Ịmalite na Ọcha
M na-emepụta ihe: Nduzi nke Onye Mmemme na-ewepu
Ọ bụ ezie na m na-eche Scratch bụ otu n’ime asụsụ mmemme kacha mma maka ụmụaka iji mụọ ihe, ọtụtụ ndị ọzọ dị dịka nh Scrọ. N’ebe ụfọdụ, ị na-elekwasị anya n’ịgba chaa chaa na akụkụ anya nke mmụta, Ebe ndị ọzọ bụ omenala.
Gbalna ma chọpụta nke ahụ bụ ihe zuru okè maka ụmụ gị;
Daisy na Dinozaurs
N’ebe sayensị na iwu nọ na-abụkarị ubi mara mma ịbanye, Ebe ahịa azụmahịa taa dị nnọọ iche. Ụwa chọrọ ọtụtụ ndị ọkachamara na teknụzụ n’ọdịnihu. Ọbụna nke ka mma, na Ịntanetị nke Ihe, Mmepụta 4.0 na ụzụ na nchekwa nchebe kiberdrošība ka ukwuu, kur nu vēl nēe enweghị njedebe.
Ọbụna agbụrụ omenala ndị dị ka ọgwụ na-arịwanye elu site na nkà na ụzụ dị ka robotics na nnukwu data.
Ọ bụ ezie na ịmụ Scratch mmemme nekad nav bijis tikpat, kā Ghara ejedebe na nwa gị na-abanye na sayensị siri ike, ọ na-enyere aka ịzụlite echiche ziri ezi ma na-akụzi usoro na nhazi ma ọ bụ ikekwe na-eke weebsa. Onweghi ihe dị na ya ma ọ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa ikiri katuị na telivishọn. Ana m akwado nke ọma ma ọ dịkarịa ala ịnwale iji gosi mmasị na mpaghara a.
Iespējams, ka programmēšanas koncepcija bērniem dažiem no mums varētu šķist nedaudz dīvaina. Es domāju,
Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka nwere ike iyi ihe na-adịghị mma nye
Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka nwere ike iyi ihe na-adịghị mma new
Перемещение домена: покупка и продажа с целью получения прибыли
Bouwen A Tribe om jo keunst; TIIDのIen Heilige Persoanオペレーション
A ’cumail sisil air earbsa làraich le Freshping
[Arolwg Marchnata]コストアデイラドゥグウェファン：Amcangyfrif yn seiliedig arトップ400 UpWorkフリーランサー
Kaip paleisti ir paleisti forumo svetainę
Vias ad Blog Entre em 6 assinaturas Magis por e-mail
10 šaltinių, skirtų laisvai samdomų vertėjų darbui Trabaho mieste